Ogaysiis: SomaliSpace.Com Under New ownership and Managment | SomaliSpace Forum,News,Videos,Chat and Discussion
Waxaan Ogaysiisiinayaa dhamaan Somalida Isticmaasha ama Daalacata barta iyo Bogga SomaliSpace Chat Fora in ay la socda in maamul cusub uu la wareegay websaydka.
@Admin Kii hore iyo maamulkisaba iyo asxaabtiisa waxay gawrasadeen in aysan wakhti iyo niyadtoona u ahayn maamulkaa update gareentisa iyo ,xaysiistiisaba ayna mashariic kale ay damacsan yihin in ay tijaabiyaan, dhalinyaradii hore ee asaasay boggaan ayaa sabab ay ka mid tahay shaqo iyo waxbarasho ay la tacalayaan sheegay in ay go'aansadeen in ay iibiyaan oo ay Reddit Somali sub ogaysiiska Soo dhigaam.
Waxaan runtii Ugu bogaadinayaa oo aan Bravo iyo salaaan sharfeed u tagayaa sida ay isagu wada raaceen una jecleeysteen in ay ku wareejiyaa SomaliSpace/SomaliFana qofkasta oo Somali ah oo niyad u haya oo keliya
Hadaba anigoo ku hadalaya magaca maamulka cusub ee iibsday boggaan waxaan si fiican uga mahad celinayaa ee UU @Admin Kii hore iyo @Khalid ay asbuucii hore oo dhan ay si fudud igu tababareen isticmaalka foraha iyo Xenforo softwarekiiisa uu ku shaqeeyo.
Waxaan kaloo ka codaysa dhamantiin in wixii fikir, ra'yi, ama talo aad ila wadaagtaan, waxaan liis dheer aan saaka ku taxay dhan magac ka fiican oo Boggaan u bixino fadlan midkii aad ka heshid ila Soo socodsiiya.
Reactions: Sundus and 486th President
Adminka cusub maay sameyn doonaan isbedel forumkan?
Inshallah Hadii Alle Idmo wax badan baan wax ka bedelayna, Waryaa @486th President Afsomaliga ma baratay aan ku Mod gareeye, moderators hore are missing in action on discord still.
Congratulations Aboowe, Meesha noo kala kick marka oo wax ka bedel, just don't bring the degenerate incels and Discord junkies like @486th President,you can't be serious modding a Khaniis minor.
Marka hore Congratulations Walaalo for wasting your money on a failed forum, Marka xiga Dee Huuno Moderators aniga igu dar ileer Mods badan baa la la'ayahy.